प्रकृतिले गर्माएकाे पानीमा जब डुबुल्की मारिन्छ‍‍… | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार प्रकृतिले गर्माएकाे पानीमा जब डुबुल्की मारिन्छ‍‍…
२०७९, २० जेष्ठ शुक्रबार १९:०५
म्याग्दी ‘तातोपानीका कुण्ड’का लागि पनि प्रसिद्ध छ । यहाँ तातोपानीका अनेक कुण्ड छन् ।किन छन् ? निश्चय पनि यसको वैज्ञानिक कारण होला । यकिन गर्न अनुसन्धान आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायले यसका बारेमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । यस्ता कुण्डका सम्बन्धमा अनेक जनविश्वास र जनश्रुति स्थानीय समाजमा विद्यमान छन् । धेरैजसो कुण्डको चर्चा स्वास्थ्यलाभसँग जोडेर गर्ने गरिन्छ ।
म्याग्दीमा अवस्थित तातोपानीको कुण्डमध्ये सिंगास्थित कुण्ड बढी चर्चित छ । मैले पनि यस कुण्डको अवलोकन र यहाँ स्नान गर्ने रहर निकै पहिलेदेखि पालेको हुँ । तर सम्भव हुन सकिरहेको थिएन ।बेनी नगरपालिका–४ (विगतमा सिंगा गाविस) मा पर्र्ने यो कुण्ड नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि निकै चर्चित छ । यहाँ नेपालका अतिरिक्त भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, जापान आदि देशबाट पनि पर्यटक आउने गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नारायण शर्मा, उपाध्यक्ष सोनी शर्मा र महासचिव गोविन्द सुवेदीलगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरूप्रति पनि अनुगृहित छु । प्रकृति पनि बडो गज्जबको छ । विश्वास गर्न पनि कठिन हुने । समुद्र सतहभन्दा ९३० मिटरको उचाइमा म्याग्दी नदीको किनारमा अवस्थित तातोपानीको कुण्ड । करिब ५० डिग्री सेल्सियसको तापक्रमको पानी । जाडो मौसममा नुहाउन त बडो आनन्द आउने । त्यसो त यहाँको पानी चर्म रोगलगायत अन्य रोगको पनि उपचारमा सहायक हुने विश्वास गरिन्छ ।
कुण्डमा बिस्तारै पूर्वाधार विस्तारका साथै यसको प्रचारप्रसार सुरु गरियो । बिस्तारै कुण्डबाट आम्दानी हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार विस्तारसहितका योजनाका आधारमा कुण्डमा आवश्यक संरचना बनाउने कार्य थालियो । अहिले यो कुण्ड निकै व्यवस्थित रहेको पाउन सकिन्छ ।कुण्डमा स्नान गर्न आउनेका लागि सामान्य शुल्कको प्रावधान रहे पनि ८० वर्षमाथिका बिरामी, अपांगता भएकालाई बिनाशुल्क स्नानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सिंगाबाट प्रस्थान गर्दा रातको करिब साढे ९ बजिसकेको थियो । बेनीस्थित हामी बस्ने होटल कस्तुरी पार्कमा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति भण्डारीजी हाम्रो बाटो कुरिरहनुभएको थियो । सन्ध्याकालीन रमझमका नाममा केही समय बिताएपछि हामी सबै अलग्गियौँ । भोलि बिहानै काठमाडौँ प्रस्थान गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई पनि समयको चटारो थियो । मुन्नी र शिवार्ती अघि नै कोठामा गएर निदाइसकेका थिए । अब म र अमृत पनि कोठातिर लाग्यौँ । साथीहरू पनि हामीसँग छुट्टिए । म ओछ्यानमा पल्टिएर पनि निकैबेरसम्म तातोपानीको रहस्यका बारेमा सोचिरहेको थिएँ । लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।
Previous articleपोखरा-काठमाडौंको भाडा ६१२ रुपैयाँ, अन्यत्र कति ?
Next articleबेनी खुल्लामञ्च ‘काम गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ (फोटो फिचर)